कालिका नगरपालिकाको परिणाम वडा नम्वर ६ निर्णयक: अव के होला ? – kalikadainik.com
बुधबार, जेठ ०४, २०७९ | ८:३३:२३ |
चितवन । चितवनको कालिका नगरपालिकामा मत परिणामको निर्णयक वडा ६ नम्वर वडा बनेको छ । कालिकाका ११ वटा वडा मध्य १० वडाको परिणाम सर्वजानिक भइसकेको छ । अहिले ६ नम्वर वडाको गणना भइरहेको छ ।
सवै वडाको गनिसक्दा मेयरमा एमालेका विनोद रेग्मी १२० मतले अगाडी रहेकाछन् । यो वडाको १७२७ मत गणना हुन वाँकी रहेको छ । यो वडामा विनोद रेग्मी यस अघि वडा अध्यक्ष रहेका थिए । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मेयर उम्मेदवार शिवराम केसीको वसोवास रहेको वडा पनि हो यो ।
कालिका नगर क्षेत्रको ठुलो वजार खोलेशिमल वजार यही वडामा पर्छ । सवैभन्दा वढी मतदाता रहेको वडा पनि यही हो । मेयरमा एमालेका उम्मेदवार अगाडी भएपनि वडा अध्यक्षको उम्मेदवारमा काँग्रेसका उम्मेदवार अगाडी रहेकाछन् ।
रेग्मीले आफु ५ बर्ष वडा अध्यक्ष भएर राम्रो काम गरेको र अहिले मेयर उम्मेदवार भएकाले आफ्नो वडाका मतदाताले आफुलाई मत दिएकोमा ढुक्कछन । यता केसी आफ्नो वसोवास भएको वडा र पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसको संगठन वलियो भएको र गठवन्धनको समेत साथ रहेकोले ६ नम्वर वडाका मतदाताको मत आफुलाई. राम्रो आएकोले आफुले जित्नेमा ढुक्क रहेकाछन् ।
अहिले गणना स्थलामा तिन समुहमा विभाजनगरी मतगणना भइरहेको छ ।